Dhibaatooyinka Cayilka iyo Gaalaysiinta Socota! – Maandoon
June 5, 2017 Cabdullaahi M. Cawsey 0 Comment
Maalmahaan waxaa socday buuq ku saabsan wadaaddo gaalaysiisay aqoonyahanno Soomaali ah oo caqliga ka cayilay. Buuqan intii uu socday waxaan la kulmay nin buuran oo ka mid ah asxaabtayda xiiseeya doodaha bulshada ka socda. Maadama maalmahan si lama filaan ah aan u cayilay ayaan saaxiibkayga buuran waxaan kala sheekaystay dhibaatada cayilku leeyahay iyo buuqa socda ee ku saabsan gaalaysiinta.
Intii uu kulankaas socday, saaxiibkayga buuran waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka u gaarka ah dadka buurbuuran sida kadeedka ay kala kulmaan kadaloobsiga oo kale! Sheekadii ku saabsanayd dhibaatooyinka u gaarka ah caloosha bilaashka u cayishay waxaa nooga soo dhex baxay falsafad fiican oo lagu sharixi karo dabciga wadaaddada wareersan ee marwalba gaalaysiiya aqoonyahannada ay ku sannifeen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee waqtigaas la joogo ay ku xanaaqeen.
Waxaan ogaannay in wadaadka gaalaysiinta ku deg-dega uu la midyahay nin buuran oo ku xanaaqay calooshiisa dabadeedna go’aansaday in miisaanka dheeriga ah qaab qaldan ama hab qar iska tuurnimo ah uu iskaga dhimo. Tusaale ahaan, waxaan ku baraarugnay in wadaadka sida fudud dadka ku gaalaysiiyaa uu la mid yahay nin buuran oo maqlay in ay fiicantahay in cayilka lala dagaallamo dabadeedna inta uu toorey qaatay dhowr kiilo ka jaray baridiisa buuran si uu miisaan dhimis deg-deg ah u sameeyo.
Inkastoo qaabkan qar iska tuurnimada ah miisaan badan la is kaga dhimi karo, haddana qofka buuran ee qayb ka mid ah jirkiisa mindi ku jaray wuxuu la kulmi doonaa dhiig bax deg-deg ah iyo dhaawac loo dhiman karo.
Sidaa si la mid ah, wadaadka ku baraarugay in aragtiyooyin uusan ka helin ay ku soo bireen baraha bulshadu ku kulanto dabadeedna si fudud ku gaalaysiiyay dadkii aragtiyahaas la dhacay ee xoogaa caqliga ka cayilay waxaa lagu mataali karaa nin buuran oo toorey inta uu qaatay dhowr kiilo ka jaray baridiisa buuran ama naasaha ka soo laalaada!
Dhanka kale saaxiibkay iyo anigaba waxaan si fudud ku ogaannay, in wadaadka wanaagsan ee aan ku deg-degin gaalaysiinta qof muslim ahi inuu la mid yahay ruux buuran oo aan qaab qar iska tuurnimo ah cayilka ula dagaalamin. Tusaale ahaan qofka caqliga leh ee ku baraarugsan dhibaatooyinka cayilku leeyahay wuxuu go’aansadaa aalamiito ” exercise” joogto ah iyo inuu wax ka beddelo raashinka uu cuno iyo qaabka uu u cuno, dhaqankaas oo muddo badan ka dib laga dhaxli karo miisaan dhimis iyo caafimaad.
Sidaa si la mid ah wadaadka wanaagsan ee marwalba ka welwala dhibaatooyinka bulshadiisa u gaarka ah wuxuu badanaa isku dayaa in uu doodo cilmiyaysan iyo caqli-celin cuskan qalbi wanaag uu la wadaago aqoonyahannada badanaa aragtiyooyinka cusub ku soo biiriya baraha bulshada, waayo aqoonyannada fekera waxay la mid yihiin ganacsato suuqa keeni karta raashin si fudud loogu cayili karo!.
Haddaba wadaadka wanaagsan wuxuu la mid yahay qof marwalba sameeya aalamiito joogto ah si loola dagaallamo dhibaatooyinka laga dhaxli karo cayilka aan laga fiirsan. Sidaa daraadeerd, buuqa socda ee gaalaysiinta ah wuxuu bulshada Soomaaliyeed u tilmaami karaa in ay nagu badan yihiin wadaaddo wareersan oo la mid ah qof ku xanaaqay baridiisa buuran dabadeedna toorey iskaga jaray dhowr kiilo si uu miisaan dhimis deg-deg ah u sameeyo.
Haddii si falsafadaysan loogu sii fiirsado, dhiig-baxa iyo dhaawaca socda waxaa la fahmi karaa in asalka dhibaatada taagan ay tahay wadaaddo qaab qaldan oo wareer ah ula jaanqaaday hormarka iyo buurnida ka muuqata guud ahaan garasahada bulshada Soomaalyeed.
Gabagabadii, saaxiibkaygii buurnaa iyo anigaba waxaan ku baraarugnay in dhibaatada cayilka lagu yarayn karo aalamiito joogto ah iyo cunidda cunto u fiican caafimaadka jirka . Sidoo kale waxaan ku baraarugnay in buuqa gaalaysiinta ah ee bulshada Soomaaliyeed ka dhex socda uusan dhammaan doonin inta wadaaddada wareersani ay buurninda caqliga bulshada kula dagaallamayaan tooreyda halista ah ee gaalaysiinta ee loo soofeeyay miisaan dhimista dadka maskaxda ka naaxa, haddii aan laga waantoobin falkaasna ay bulshadu ka dhaxlayso dhaawac iyo dhiig baxa daran!
← Sidee baan Wahaabi ku noqday?
Ma nihin ilaahyo! Innagu ma nihin ilaahyo! →